PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-05-14 - Bakhala ngolwehhovisi likandunankulu
Bakhala ngolwehhovisi likandunankulu
IKHALA iyazithulisa intsha yaseMbazwane KwaMhlabuyalingana ngehhovisi likaNdunakulu waKwaZulu-Natal ngokuyibambisa isisila sehobhe ngamathuba omsebenzi ebeliyithembise wona ngemuva kokuqeqeshelwa ukuba ngamaDigital TV Installers ezindaweni zasemakhaya.
Intsha yakule ndawo ithe ibihlukaniswe amaqembu amathathu ngesikhathi iqeqeshwa. Iqembu ngalinye ithe belinabafundi abangu-25 futhi bekubhekwa eqhamuka emakhaya ahlwempu.
Ekhala kakhulu eseqenjini lokuqala ethe ayinikwanga ngisho izitifiketi zokuthi isiqeqeshelwe lo msebenzi futhi ilokhu ithenjiswa into engekho.
Iqembu lesibili nelesithathu lona kuthiwa lizitholile izitifiketi namathuluzi okusebenza kodwa akukho noyedwa onikwe umsebenzi kuyona. Kunalokho ithe ibone sekuqhamuka abantu baseQwaqwa bezokwenza lo msebenzi eqeqeshelwe wona futhi akasekho ongena indaba yayo.
“Ngesikhathi lolu hlelo lulethwa kithina kwathiwa luzosiza intsha yasemakhaya ahlwempu kodwa sibona kuyilona olulethe izinkinga kakhulu ngoba kukhona abanye abafundi asebevaleleka eminyangweni kahulumeni ngoba kuthiwa amagama abo avela ngaphansi kwalolu hlelo futhi kuvela ukuthi bayahola,” kusho omunye oqeqeshiwe.
UNksz Nokuthula Mthembu (32) uthe yena uvaleleke ethi uyoqeqeshelwa ukusebenza eMnyangweni wezeMfundo kule ndawo ngenxa yalolu hlelo.
“Bese ngithathiwe eMnyangweni wezeMfundo ngizoqeqeshwa ngaphansi komkhakha weHuman Resources Management. Inkinga iqale ngesikhathi kufakwa inamba yami kamazisi kuma-computer kwavela ukuthi ngingaphansi kohlelo lweDigital TV Installers okuthiwe lungaphansi kweSeta.
“Bathe okunye okuvelayo wukuthi ngiyahola ngaphansi kwalolu hlelo ekubeni angikaze ngithole ngisho isenti ngalo. AboMnyango wezeMfundo bathe abakwazi ukungithatha bangifake ngaphansi kohlelo lokuqeqeshwa lwabo ngoba akuvumelekile ukuthi uhlomule kabili ngemisebenzi kahulumeni,” kusho uNksz Mthembu.
Uthe uchazile ukuthi akakaze athole lutho ngalolu hlelo futhi akanaso ngisho nesitifiketi ngokuqeqeshwa kodwa kwathiwa ngeke esakwazi ukuqala ngenxa yale nkinga.
Uthe zikhona izinamba abamnike zona ukuthi afonele abazokhipha igama lakhe kulolu hlelo angahlomulanga lutho kulona kodwa igama lakhe alicishekanga kwaze kwagcina kufike umnqamulajuqu wamasonto amabili abenikwe wona.
Ngokohlelo lweDigital TV Installers bathe bekulindeleke ukuthi bathole izitifiketi ngoMashi kodwa phinde.
Okhulumela uNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnuz Ndabezinhle Sibiya uthe uNdunankulu ubengazi ukuthi kunenkinga kwezinye izindawo ngalolu hlelo.
“Ihhovisi likaNdunankulu lizoluphenya lolu daba ngoba siyaqala ukuzwa ngalo. UNdunankulu uxolisile entsheni engacaciselekile ngokuthi kwenzekani.
“Kumanje usejube ukuba kulethwe umbiko ogcwele ngalolu daba ngabasebenzi abaqondene nalolu hlelo,” kusho uSibiya.